Isikolo samabanga aphakamileyo i-Livingston, uBill Clinton, kunye neenkani, umbono, okanye zombini? - Ijezi-Entsha Yezopolitiko
Eyona Ijezi-Entsha Yezopolitiko Isikolo samabanga aphakamileyo i-Livingston, uBill Clinton, kunye neenkani, umbono, okanye zombini?
Isikolo samabanga aphakamileyo i-Livingston, uBill Clinton, kunye neenkani, umbono, okanye zombini?
Kwakungu-Arhuluneli yase-Arkansas u-Bill Clinton, ngokwenkumbulo yomnye umntu wangaphakathi, owaxelela i-PolitickerNJ ukuba ukhumbula ngokucacileyo u-Clinton ekhankasela kwisikolo samabanga aphakamileyo, ethi le ntsasa ibe yindawo ye-kickoff ye-Gov. Chris Christie.
Nangona bengamaqela awahlukeneyo, imeko-bume ejikeleze abagqatswa babo yahlukile, uClinton wayephakathi kokunyuka kwezoqoqosho kwilizwe lakhe kwaye onwabele amanqaku aphezulu xa wayebalekela umongameli, kwaye ukubonakala kwe-Arkansan e-Livingston High kwakuse unyulo jikelele, hayi oluphambili, ixesha elibekiweyo, uChristie noClinton babelana ngesimo esinye.
Kulungile, mhlawumbi ngaphezu kwesinye.
Sikhumbule nje, uClinton kwafuneka abethe umfana ogama linguBush, naye.
Kodwa ukongeza koko, bobabini banenkolelo yokuzithemba yeTeflon ebatyhalela phambili kwanaxa abantu ababangqongileyo bebaxelela ukuba babuyele ezantsi okanye bafumane ibheyile.
Kule Isiqwenga seNew York Times , UMat Bai ujonge indlela u-Gary Hart owazitshabalalisa ngayo u-Mongameli u-Gary Hart, kodwa ukuwa kuka Hart kunye neentloni ngesiqendu esingaphandle komtshato emva kweminyaka emine kwavela u-Clinton, umgqatswa ongazange avume ukothuka ngamahlazo. esoloko isongela ngokuwatshabalalisa amathuba akhe.
Ukuphunyuka kukaClinton kwenza iBusiness Monkey ibukeke njengesikolo saphambi kokufunda. Kodwa ngokungafaniyo noHart, akazange anikezele ukuba abanye abantu baziva ngathi ii-antics zakhe azimfanelekanga.
Ewe, waphumelela iiprayimari ngaloo nyaka kunye nonyulo jikelele.
Akukho mntu uthi ikamva likaChristie liya kuba njalo, kwaye ngokuqinisekileyo kunokuba yinto elula ukufumanisa into enokuthi ibe yi-Achilles Heel kumadoda omabini kwaye icebise ukuba yile nto ichaza inkokeli. Kodwa imeko eyoyikisayo ejikeleze uChristie ngoku icebisa ukuba akangekhe aphumelele, ulimele ngokwepolitiki, kwaye akangomntu omiselwe ikamva. Abantu baseRiphabhlikhi abakunye naye basebenzise irekhodi ukuba abafuni nje ukungonwabi ekubeni bajongane naye benomsindo xa ebuya ekubalekeni engaphumelelanga kwaye ke bamxhase. Yibize ngokuba neenkani, umhlaba wefu we-cuckoo, i-hubris emsulwa, okanye umbono, kodwa ukwala kukaChristie ukuphazanyiswa yiBridgegate kuthwala ukwala okukhohlakeleyo ngokufanayo ukuvumela ihlazo ukuba lime endleleni yokudubula okuphezulu, oko uClinton anako.
Kwiinyanga ezimbalwa ezizayo kuya kugqitywa ukuba umnqweno wakhe wokubaleka ungqineka uyintsimbi, ukungashukumi kuya kuba phakathi kwezinto ezibonakala ngathi zizenzele kuye, okanye zizinto ezibuhlungu ze-ego.
UJean-Michel Basquiat 'ongenasihloko (iNtloko)' Kulindeleke ukuba athengise nge- $ 12 yezigidi
Ngenxa yokuba unokuba nethuba elivuzayo, Nantsi indlela yokuyiphilisa
Yintoni Impumelelo ka'Dave 'kwiFX
Ngaphaya kweBuckingham: Amakhosazana amabini akwiprowuhi 'kubusuku basebukhosini'
nayiphi na imiboniso bhanyabhanya yeemfazwe
Eyona testosterone ikhuthazayo ivithamini shoppe
ukulinganisa uprofesa wam christine blasey ford
jonga amanani mahala